Thursday May 21, 2020 - 15:40:44 in Wararka by Burco Staf
WHO: Dunida waxay wajaheysaa kiisaska coronavirus ee ugu badnaa
Jawaabta dhakhtarka ee su'aasha 1-aad:Cudurkan Covid-19 sidiisaba waa cudur ku dhaca meelaha neef mareenka, sida sanka, afka, dhuunta, oo ilaa sambabbada gaara. Marka jawaabtu waxay tahay in qofka markii horeba qabay cudur neef mareenka waxyeelleeya kanna uu ku sii noqonayo dhibaato kasii weyn. Sidaas darteed arrintaas aad uma wanaagsana. Waxaa dhici karta in dadka uu aad u asiibo ay ka mid noqdaan.
Jawaabta dhakhtarka ee su'aasha 2-aad:Cunto uu kariyay qof qaba cudurka corona haddii aad cunto waa khasab inaan cudurka ka qaaddo, maxaa yeelay waxyaabaha fayraska laga qaado waxaa ugu horreeya taabashada, waaa sababta loo yiri hala kala fogaado. Sidaas darteed adigoo qofka u dhawaatay ayaad cudurka qaadsiin kartaa, marka haddii aad taabato weelashii uu cuntada ku kariyay ee uu taabtay adigana khasab cudurka wuu kugu dhacayaa.
Qofka aan qabin cudurro hore oo soo jireen ah sida macaanka ama sonkorowgaiyo wixii la mid ah haddii uu cudurka Covid-19 ku dhaco si fudud ma uga kici karaa?
Jawaabta dhakhtarka:Inta badan dadka uu cudurka aad u saameeyo, oo u baahan isbitaal ama u geeriyooda waa dadka cudurrada horay u qabay sida dhiig karka, sokorta iyo wax la mid ah. Laakiin haddii uusan qofka intaasoo dhan qabin oo uusan waayeel ahayn waxay u badan tahay 90% inuu si fudud uga kaco.
Jawaabta dhakhtarka:Waxaan horay u sheegnay in coronavirus aan wax badan laga aqoonin, laakiin cudurro kale oo ay isku nooc yihiin nidaamka ay u dhaqmaan ayaan ka tusaale qaadan karnaa, sida cudurka flu-ga oo inta badan dilaacca xilliga qaboobaha. Haddii uu cudurkaas kugu dhaco way yartahay sida uu kuugu soo noqdo. Xogta coronavirus ee hadda adduunka laga ogyahayna waxay tilmaameysaa in marba haddii uu kugu dhaco ay yartahay fursadda uu mar labaad kuugu dhici karo.
Jawaabta dhakhtarka:Soomaalida badanaa marka uu hargabka ku dhaco ama durayga way isticmaalaan waxyaabahaas laakiin dhammaan waxyaabahaas daawo ma aha ee waa kaalmo. Waxay kugu kaalmeynayaan in qufaca, hindhisada iyo qandhada ay kaa jabiyaan. Marka waxyaabahaas oo aan qofka dhibaato u keeneynin wuu isticmaali karaa, wuuna u adeegsan karaa corona laakiin dhinaca cilmiga seyniska laguma hayo wax caddeyn ah oo muujineysa inay muhiim yihiin.
Jawaabta dhakhtarka:Wax baaritaan dhinaca seyniska ah oo arrintaas lagu ogaaday ma jiraan, laakiin sida ay u badan tahay taas ma dhacdo. Sababtoo ah kaneecadu waxay qofka ka dhuuqdaa dhiigga, cudurkanna waxaa lagu kala qaadi karaa qof qabay oo qof kale taabtay, kaddibna uu qofkaas wajigiisa sii taabto.
Jawaabta dhakhtarka:Wax kalsooni darro ah oo baaritaankaas lagu qabi karo ma jirto, sababtoo ah qalabka la isticmaalayo waa casri ah oo aad iyo aad looga soo shaqeeyay oo wanaagsan. Kaliya meesha su'aasha ay ka jirto oo shakiga keeni kara waa in qofka baaritaanka qaadaya ayey dhici kartaa inuusan aqoon u lahayn nidaamkii wax loo baari lahaa iyo nidaamkii qalabka loo isticmaali lahaa.
Jawaabta dhakhtarka:Markii la dhaho cudurka wuxuu u daran yahay dadka waayeelka ah micnaheedu ma aha in qof kasta oo da' ah uu u geeriyoonayo. Laakiin haddii uu qofka waayeelka ah caafimaad qabo, cudurro halis ahna uusan lahayn wuu ka kici karaa xanuunka.